Goalaha ammaanka oo ka hadlay Qaabkii looga hortagi lahaa Ururada ku xiran Al-Qaacida ee ka jira Soomaaliya. | warsugansomaliya.wordpress.com
Goalaha ammaanka oo ka hadlay Qaabkii looga hortagi lahaa Ururada ku xiran Al-Qaacida ee ka jira Soomaaliya.
Xog’hayaha guud ee Q,M Ban Ki Moon oo hadal ka jeedinayay kulan ay xubnaha golaha amaanka ee Q,M ku yeesheen magaalada New York ayaa waxaa uu sheegay in loo baahan yahay in la sameeyo qorshe looga hor tagayo qataraha ka yimaada ururada Al-Qacida ku xiran ee ka jira qaaradda Africa oo ay ku jirto Xarakadda Al-Shabab oo Soomaaliya ka dagaalanta.
Ban ki Moon waxaa uu sheegay in qaaradda Africa ay dhibaato amaan ku hayaan ururada Al-Shabab oo Soomaaliya ka dagaalanta, Boka Xaraam oo Nigeria ka dhisan iyo Maqribul Islam oo aas aasan wadanka Morocco.
In la xoojiyo tilaabooyinka military ee gobolka ayuu sheegay xog’hayaha guud ee Q,M inay yareyn karto dhibaatadda ururadaan waxaana uu ku baaqay in la sameeyo tilaabooyin looga hor istaagayo inay dhul hor leh ku fidaan.
Ban ki Moon waxaa uu hadalkiisa ku sheegay in xafiiska ay Q,M dhawaan ka furanayso Magaalada Muqdisho uu qeyb weyn ka qqaadan doono ka taageerada dawlada Sooomaaliya dagaalka ay Shabab ku kula jirto.
Xog’hayaha guud ee Q,M waxaa uu sodii kale soo hadal qaaday ururo kale oo uu sheegay inay Shabab xiriir la leeyihiin oo ka jira qaaradda Africa oo uu xusay in loo baahan yahay in si wada jir ah loola dagaalamo.
May 14, 2013 in Home, warka.
Gollaha Samatabixinta Puntland oo Urur Mucaarad ku ah Xukuumadda Madaxweyne Cabdirixmaan Faroole ayaa galabta kulan ku yeeshay gudaha magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari.
← warkii caawa ka baxay somalichannal
wararkii ugu danbeyay doorashoyinka juba-land iyo loolan cusub oo mushaarixinta ay la soo bexen →